Isinkwa siphupha kanjani (esimhlophe nesimnyama, esisha futhi esibunjiwe). Kungani uphupha ngokudla, ukusika isinkwa, ukwabelana ngakho.
Ngokuvamile abantu banesithakazelo kulokho abaphuphayo ngesinkwa (esimhlophe noma esimnyama). Lokhu kukhuluma okuningi mayelana nezincwadi ezahlukene zokuphupha. Sizokwenza ukuhumusha okushiwo ukuthi isinkwa siphupha ngani, sinqume, sibheke, kanye nezinye izinhlobonhlobo zephupho elinjalo.
Ukupheka isinkwa ngephupho: incazelo ngokusho kwe-A. Miller's book dream
Isinkwa esimhlophe esimhlophe : sibonisa inhlalakahle nokuchuma emndenini. Kubuye kubhekwe njengesifungo esihle kulabo abalindele ukuthuthuka okusheshayo emkhakheni wezemisebenzi.
Bhaka isinkwa ngephupho : Ukupheka isinkwa ngokuzimela kubonisa ukwaneliseka ngokuphila nokuthola injabulo. Kodwa uma ekugcineni umkhiqizo ube yinto engacabangi, udideka, uyabuhlungu, bese ukhuluma ngokuthembela kwakho ngokuqinile ezimweni ezizungezile, ubunzima bokuthatha izinqumo. Uma ubhaka isinkwa ephusheni nomunye umuntu, kungukuthi ukuphakanyiswa kokuqala kokubambisana ebhizinisini elinenzuzo.
Sika isinkwa : iphupho liveza ukungqubuzana kwangaphambili ngezizathu zemali. Uma kwakukhona okhiye ngaphakathi, kuzomele ulinde izindaba ezimbi emsebenzini. Lapho isinkwa siphupha ngesikhutha, kubalulekile ukuqedela yonke ibhizinisi iqale ngokushesha.
Yini ephupha ngokudla isinkwa : iphupho likhuluma ngokusondela kokuchuma kwempahla nokuthula kwangaphakathi.
Ukuthenga isinkwa : kukhuluma ngemizamo engaphumeleli yokuhlelwa kwempilo yangasese.
Ukuhumusha ebhukwini lezincwadi zaseRussia, iphupha lithini ngalokhu
Kuvunywa ukuthi isinkwa sibonisa ukuchuma. Ngakho-ke, uma uphupha ukunikeza isinkwa, lokhu kuhle, kodwa uma ngesikhathi sokuphulukisa ukhubeka ekubukeni komuntu, kusho ukuthi udinga ukubheka abanye. Kubonakala sengathi othile uqinisa amazinyo akho.
Kungani uphupha isinkwa esikhulu? Iphupho lisho ukuthi ulangazelela ubuntwana kanye nemigomo yemindeni eyakuzungezile kulezo zinsuku.
Kungani kufanele uphuze isinkwa esimnyama : indlu yakho iyavumelana kakhulu, futhi umndeni - nobungane.
Ngokuvamile, singasho ngokuphepha ukuthi akufanelekile ukukhathazeka ngalokho okushiwo yiphupho. Ngokuvamile lezi ziphupho ezinhle, ezithwala izixwayiso ezibucayi mayelana nekusasa lakho eliseduze.
Imikhiqizo emibi ngesikhathi sokukhulelwa
Amathiphu awusizo kulabo ababhema
Indlela yokulondoloza uthando, ubuciko bokuxhumana
Izinhlobo eziyinhloko zobudlova obhekene nabesifazane emndenini
Yiziphi izinongo kanye nezikhathi zokunakekelwa ezingangenelelwa ekudleni kwezingane?
Ukuqonda kanjani lapho umuntu ekhwele?
5 Izimfihlo Zesikhumba Esikhunjini: Uhlelo Lokunakekelwa Kwama-Asian
Ubisi lobisi lwelayisi: zokupheka nsuku zonke